P - Iimpawu zePhupha lamaPhunga kunye neentsingiselo | Isichazi-magama samaphupha - Isichazi Magama Sephupha
INKCAZO YOPHUPHO P-Amafutha ePhupha lweeMpawu kunye neentsingiselo
P - Iimpawu zePhupha lesiQholo kunye neentsingiselo
IPHUPHA: UKUYA B C D NGU F UG H Mna UJ UKUYA U-L M U-N OKANYE Iphe Q R S T U V NGAPHAKATHI X Y NGE
P - Amafutha
IPhoenix - Ityhefu
Iitapile - iPyrite
( Jonga ukuBamba, iZinxibo, iimaski, iTheatre )
Ingqondo yokuba ilizwi lakho alivakali, okanye umyalezo owubonisayo awamkelwa njengoko bekucwangcisiwe.
Ukuhamba ngaphandle kokuziveza ngokufanelekileyo kwabo bakungqongileyo.
( bona Izixhobo zokuDibanisa )
( Bona Iintsomi )
( jonga iGadi, Isiqithi, iOasis )
( jonga ukuNgxamela, ukuba ndindisholo )
Ukungakwazi ukwenza isigqibo kukushiya kwikona okanye kukhokelele kwisiphelo esibi.
Inxalenye yakho ihleli ingachazwanga okanye ingaphuhlanga, kwaye ke ayinakho ukudibanisa ngokufanelekileyo, ibangele inkqubela phambili ebanjiweyo. Jonga ukuze ubone ukuba yeyiphi indawo yomzimba wakho ekhubazekile ukuze ube nokuqonda okungakumbi. Umzekelo, ukukhubazeka kwesandla sakho kungabonakalisa ukungakwazi ukunika ngothando okanye ulwamkele uncedo xa unikezelwa.
Uloyiko kunye nezinye iimvakalelo ezinzulu ezikushiya ungakwazi okanye ungathandi ukwenza.
( bona Amadoda, Ubudlelwane, Abafazi )
Ukubonakalisa ubudlelwane bakho nabazali bakho ngoku, okanye inkumbulo yamava adlulileyo kunye nabo.
Archetypally, uthixo okanye uthixokazi ongumzali kubo bonke abantu abakhokelayo nabakhuthazayo ( bona Ingelosi, Icon ).
Nawaphi na amagunya omhloniphayo ngendlela efanayo nomzali.
Umntu onguMntu oPhakamileyo.
( jonga iintaka, iintsiba, amaphiko )
Funda konke malunga UMoya, iTotem kunye nezilwanyana zamandla !
Imilinganiselo yokulinganisa, iimpawu, okanye iindlela ezingabonakali ukuba ungubani.
Ukuphindaphindwa kwemijikelo okanye iipateni ebomini bakho, ezinye zazo zinokungabi ntle.
Phakathi kwamaIndiya asePueblo, omnye umfuziselo welanga, oquka amandla ombala kunye nokukhanya.
Ukuba isikhwenene sisemoyeni, mhlawumbi luhlobo lwephupha eliphaphazelayo.
Umntu 'ongu-ewe' owamkela yonke into axelelwa ukuba ayenze okanye ayikholelwe ngaphandle kophicotho lwenene.
Ukugculela okanye ukuhleba.
Kwikheyiji, isikhwenene sibonisa ukungakwazi ukudibanisa izifundo ozibonayo zibonakaliswa ngamanye amazwi nezenzo zabantu.
Iipaseji (Amaphupha) Amaphupha
( bona uMnyango, uHola wendlela, iNdlela, iiWindows )
( jonga iAlley, ikona, isiphelo sokufa, umendo )
Izikhokelo zokomoya kunye nokugxila. I-Taoism, umzekelo, iguqulelwe kwi-Chinese, ithetha 'indlela' okanye 'indlela.' UbuBuddha bufundisa iindlela ezisibhozo zokukhanyisela. U-Kristu wathetha ngomendo wobulungisa.
Isikhokelo, umthetho, okanye umbono olandela ngoku, okanye ucwangcise ukulandela kwixesha elizayo. Iindlela zichaze imida ebabeka ecaleni kwilali ehamba nayo, ibonisa indlela yokuhamba.
Umqondiso wobugwenxa okanye ubukho. Kwintsomi yaseYurophu neyasemaphandleni yaseMelika, imigca eluhlaza egqamileyo yengca yayibizwa ngokuba yimizila yentsomi, kwaye kukholelwa ukuba yenziwa kukudlula kwezi zinto zokuqala.
Imilinganiselo: Ukutshintsha ukusuka kwikamva lakho okanye ukuthatha iindlela zokwexeshana kude neenjongo ebezikhankanyiwe ngaphambili.
Ulwahlulo: Kufuneka kwenziwe isigqibo, kodwa zombini ezi ndlela zibonakala zilingana. Jonga ukuba iphupha lakho lityhila into malunga nokhetho ongakhange ulibone okwangoku, njengenye indlela ebonisa ukhula olunokubambisa.
Ukunxiba kakuhle: Nokuba usengxakini, okanye uhlala unyanzelekile kwindlela enye yokucinga kunye nokuphila kangangokuba iindlela ezifanayo ezindala zihamba ziphindaphindeka.
Ukuchaneka: Ukuhlala unyanisekile kwiinjongo zakho, indlela ophila ngayo, kunye / okanye iinjongo.
( bona iziqhamo, imithi )
Ngokubanzi ngumfuziselo wobulumko, ngaphandle kwaseMpuma apho iipesika zinikwa khona iimpawu ezongezelelekileyo zomtshato owonwabileyo kunye nobomi obude.
E-China, iintyatyambo ezithwala iipesika zisetyenziswa ngaphakathi ekhaya ukuthintela ukungakhathali. Ukuba iingxabano ziphezulu kunye nosapho lwakho mva nje, ngoku lixesha lokuqala inkqubo yokuphilisa.
Phakathi kweTaoists, umthombo onika amandla emveliso, ngakumbi ngengqondo. Le ngcamango ibonakala iyinyani nakwezinye iinkcubeko, njengoko amaGrike athi esi siqhamo kulawulo lweVenus, kwaye uAlbertus Magnus wakhuthaza ukutya iiperesi njenge-aphrodisiac.
I-pun ehlekisayo ebonakalayo ebonisa imeko okanye umntu omfumana ngaphantsi kwe-'pesika. '
( jonga intaka, iintsiba, amaphiko )
Imbonakalo yangaphandle yelize okanye ikratshi.
Ukuziveza ngendlela abanye abayibona ngathi iyaqhayisa.
Ikratshi, isidima, okanye ukuzihlonipha (umzekelo, ukuba neqhayiya njengepikoko).
EBhabheli nasePersi, uphawu lolawulo. Kwangokunjalo naseMpuma, iipikoko zimele isikhundla kwaye zifumene ukuthandwa ngabantu abanamandla.
UBuddhist: Uvelwano kunye nokuthembeka. Kwakukholelwa ukuba uKwan Yin, umkhuseli wabantwana noomama, uthathe le fomu, kwaye iipikoko ziyakubulawa sisizungu xa amaqabane abo eswelekile.
Isilumkiso sokuba ukuqhayisa ekugqibeleni kuya kuzisa usizi. Le ntaka ixela kwangaphambili ngemvula ngomdaniso wayo.
( jonga i-Gems, i-Oyster, i-Seashell )
Into ethi yakufunyanwa, ilifanele lonke idini lakho (umzekelo, 'iperile yexabiso eliphakamileyo').
I-Sagacity kunye nezinto zokuyila (umzekelo, 'iiperile zobulumko').
Olunye uphawu lwenyanga namanzi.
Ieperile zamanzi amnandi: Ukudityaniswa kunye, babonisa ukuqhubela phambili kokufunda, okanye ukucinga nzulu okukhokelela kwizigqibo ezibonakalayo, isenzo okanye isiphetho.
Ieperile ezimnyama, ngelixa zinqabile, eneneni zithathwa njengesiphatho esibi ngenxa yombala wazo (umhlophe umele ubumsulwa). Into ethile kumgca wakho wokuqiqa okanye imeko yangoku inokuba nesiphene, kwaye inokukhokelela kwingxaki.
( jonga Ukutya, Igadi, Imifuno, Imidiliya )
Omnye umfuziselo wamatyhalarha angamadoda, ngakumbi xa uphupha ngababini.
Iipeyisi ezinamehlo amnyama ezibonakala kumaphupha zibonisa ukuphucuka kwethamsanqa.
Ubuhlobo obutofotofo, ubudlelwane, okanye ubuhlakani (umzekelo, 'njengee-ertyisi ezimbini kwipod').
( Bona Iintsomi, Ihashe )
Ukuba nokuqonda okunzulu kwamaphupha ngePegasus kunokuba luncedo ukufunda malunga nawo Isimboli samahashe kunye nentsingiselo .
Ukunyuka ngaphezulu kweemeko, okanye ukuhlala udada xa ulwandle lweemvakalelo lusongela ukoyisa wena. Ngaphandle kobungakanani bayo obukhulu, obungaqhelekanga, iipikican ziyinyani kakhulu.
Ubulumko bokungakhathali, nangamaxesha okubonakala kokuninzi. I-Pelicans ayikutyi kwangoko ukubamba kwabo, kodwa bayigcine kwiibhili zabo.
I-Folkloric: Ukuzincama ngenxa yento oyithandayo, okanye okulunge ngakumbi. I-streak ebomvu kwisifuba se-pelican kuthiwa yenzeke xa ivula ngokwayo ukuze ityise abantwana bayo abalambileyo.
Ukuba uqubha emanzini, oku kubonisa ukuhamba simahla ngamaphupha akho. Lindela amaphupha amaninzi, kunye nezo zineenkcukacha ezandisiweyo.
Unombombiya unamaphiko, kodwa akabhabhi. Oku kuyabanceda bahambe emanzini. Ke, ukuba ubuzama 'ukubhabha' kwimeko ethile ebonakala ngathi ayiyi ndawo, jonga elinye iqhinga, usebenzisa iitalente ozinikiweyo kunye nokuqonda njengesikhokelo.
Amaphupha malunga ne-peony ziifowuni ezivela kwizikhokelo zomoya kunye neengelosi zisixelela ukuba ngoku lixesha lokucwangcisa izicwangciso zethu zobomi.
Ukuphupha ngee-peonies nako kunokuba ngumyalezo osazisa ukuba ukucinga ngexesha elidlulileyo kuya kusinceda sifezekise ukuzaliseka kwethu.
Ezi ntyatyambo zintle zentwasahlobo zinokuthumela amandla azo okuthanda ukuba zikunike inkalipho yokuphuma kwigobolondo lakho kwaye ukuba neentloni ebomini kungaluthintela ulonwabo lwakho.
Kwiintsingiselo zeentyatyambo kunye neesimboli, iiPeonies zimela ubudlelwane obunothando obuzaliswe luxolo kunye nokuqubisana.
IPentagram / Amaphupha ePentekoste
( bona Isihlanu, iNkwenkwezi )
Legraphograph yayisetyenziswa kakhulu kwihlabathi lamandulo njengekhusi elikhuselayo, ngakumbi ukukhusela iliso elibi kunye nomlingo oyingozi. Kwinqwelomoya ophuphayo, oku kungabonisa ukuba uziva uhlobo oluthile lwesoyikiso se-psychic okanye esiqhelekileyo kwimpilo-ntle yakho ekufuneka uyithathele inyathelo elifanelekileyo.
Umfuziselo weemfihlakalo zesoteric, kwaye ngokunokwenzeka nophuhliso lwezinto ezithile zobugqi okanye zomlingo ngaphakathi. Qaphela ukuba ipentekoste yayihlala ibizwa ngokuba yinkwenkwezi yewizard okanye umnqamlezo wobugqwirha kumaXesha Aphakathi.
Phakathi kwamaGypsy kunye nezinye iinkolo ezijolise emhlabeni, le pententi yayingumfuziselo wempilo kunye nobomi obude. Oku kungenzeka kuphuhle ngenxa yendalo ebunjiweyo eyenziwe yimbewu xa iapile lisikiwe ngesiqingatha.
Amafutha (Aromas) Amaphupha
( bona Isiqhumiso, Iintyatyambo, Amakha )
Kwiinkolelo zabantu baseYurophu naseVictoria zaseMelika, ii-aroma ezithile zibonisa ubukho bomoya ( bona iGhost ), ngakumbi ii-colognes ezithandwayo kunye neziqholo zamalungu osapho aswelekileyo.
Amakha amabi abonisa ingqumbo, umona, kunye nesimo sengqondo esingqwabalala. Eli vumba linokubonisa ukuzama ukufihla into engcolileyo.
Amavumba amnandi agulisayo abonisa ukunganyaniseki, ukunganyaniseki kunye nohanahaniso.
Ukukhanya, amavumba amnandi ahlala enxulunyaniswa neemvakalelo ezintle. Umzekelo, ivumba elimnandi le rose lifanekisela uthando lwethenda, kunye nevumba le honeysuckle linokubonisa ukufezekiswa (umzekelo, 'ivumba elimnandi lempumelelo').
Iinkumbulo: Abanye abantu basabela ngokuqinileyo kwii-aroma, kwaye banokuphinda bafumane amava ngamavumba avela emaphupheni abo.
scorpio umhlaza wabasetyhini ukuhambelana kwendoda nothando
Ngaba ii-virgos kunye neepisces ziyavana
njani iiplanethi kwinkqubo yethu yelanga